Vung Tau yɛ kuro kɛseɛ a ɛwɔ Vietnam.
Vung Tau yɛ kuro kɛseɛ a ɛsane nso wɔ Bà Rịa–Vũng Tàu province a ɛwɔ Vietnam anaafoɔ fam. Kuro no wɔ asaasetam bɛyɛ 140 square kilometres (54 square miles), kuro no sane nso wɔ urban wards ahodoɔ du-mmiensa (13) ɛne commune baako a ɛwɔ Long Sơn Islet. Vũng Tàu na na ɛyɛ province no ahenkuro kɔsi sɛ wɔde Bà Rịa city bɛhyɛɛ n'anan mu wɔ ayɛwohomumɔ bosome no da a ɛtɔ so mmienu wɔ afe mpem mmienu ne du-mmienu (2 May 2012). Kuro yi sane nso yɛ kuro a fangoo ahodoɔ a ɔman Vietnam tuo no nyinaa wɔtu mu fa dodoɔ no ankasa wɔ hɔ.
Wɔ Vũng Tàu kuro mu no, afahyɛ titirew baako a wɔde paa ara ne Lễ hội Cá Ông (Whale Holiday).Afahyɛ ahodoɔ a ɛwɔ kuro no mu bi nso ne Kite Festival ɛne World Food Festival Culture Nsrahwɛfoɔ firifiri Australian ba Vũng Tàu kuro no mu wɔ ɔsanaa bosome no mu afe biara bɛdi Battle of Long Tân afahyɛ no.
Wɔ mmea mea ahodoɔ beberee no ara wɔ Vietnam man mu no, Buddhism ne som a nnipa dodoɔ no ara som. Mahayana Buddhism, ne deɛ agye nhyini pii wɔ Vietnam man no mu, na wɔn a wɔde baa Bà Rịa-Vũng Tàu ne Vietnamfoɔ a wɔte ɔman no atifi fam wɔ mfenhyia du-nson ahyeaseɛ no mu no (17th century) berɛ a wɔtrɛtrɛɛ Nguyễn lords ahodoɔ no mu no. Buddhist som no wɔ hyiadan ahodoɔ mmiensa bi a ɛne, Thích Ca Phật Đài, Phổ Đà Sơn Quan Âm Bồ Tát Tự Temple, ɛne Niết Bàn Tịnh Xá temple, draw pilgrims from around the country.
Yɛ yi fii "https://tw.wikipedia.org/w/index.php?title=Vung_Tau&oldid=75163"
Nsesae ba kratafa yi so da 9 Ɔbɛnem 2022, mmere 00:21.